Dawlada Somaliya oo heshiis la gashey shirkad hanti dhawr si ay ula socoto kharashaadka dawladda. [Akhris …] – Radio Daljir
Dawlada Somaliya oo heshiis la gashey shirkad hanti dhawr si ay ula socoto kharashaadka dawladda. [Akhris …]
Muqdisho, July 09 – Shirkadda Price Waterhouse, ee ka mid ah sharikaadka ugu sarreeysa caalamka ee dhinaca xisaab haynta ayaa waxaa ay la gashey dawlada federaalka ah ee Soomaaliya heshiis ku aaddan heynta dakhliga dawladda ee ku soo gala deeqaha ay siiyaan waddamada Caalamka.
Shirkaddan oo lagu magacaabo PwC ayaa waxaa ay xafiis ka furaneysaa magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya, si ay ula socoto kharashaadka dawladda iyada oo si gaar ah ula soconeysa adduun dhan 67 oo Doollarka Mareykanka ah oo loogu deeqay dawladda bishii April ee sanadkaan.
Inkasta oo dawladda KMG ee Soomaaliya ay kula jirto dagaallo kooxo ka soo horjeeda ayaa haddana wali waxaa jirta rajada ay ka qabto dawladdu in ay gacanta ku dhigto magaalada Caasimadda ah ee Muqdisho.
Dawladda KMG ayaa la sheegey in ay xilli horeba ay soo gaareen qeyb ka mid ah lacago deeqo ah oo loogu deeqey iyada oo u siisey Mushahar ahaan ciidamada dawladda ee dagaallada kula jira kooxaha ka soo horjeeda DFKMG ee Soomaaliya.
Shirkaddan Hanti dhawr ee ay la gashey heshiiska dawladda KMG ee Soomaaliya ayaa waxaa ay la soconeysaa xisaabaadka kharashaadka dawladda iyada oo sidoo kalena la sheegey in faraqa loogu shubi doono dhammaanba lacagaha deeqaha ah ee ay hesho dawladda si aysan u gelin gacan musuq maasuqisa oo dawladda KMG xaggeeda ka socota.